Iintlobo zoBakhoboka e-Afrika
Ingaba ubukhoboka bukhona kwimimandla yase-Afrika engaphantsi kweSahara ngaphambi kokufika kwe-Yurophu indawo echasene kakhulu phakathi kwama-Afrocentric ne-Eurocentric academics. Yintoni eqinisekileyo kukuba abantu baseAfrika babephantsi kweendlela ezahlukeneyo zobukhoboka kwiikholeji, kubandakanywa ubukhoboka be-chattel phantsi kobabini bamaSulumane kunye neentengiso ze-slave-trans-Saharan kunye nabaseYurophu ngokusebenzisa urhwebo lwe-slave-Atlantic .
Nangemva kokupheliswa kweentengiso zekhoboka e-Afrika, amagunya aseColonial asebenzisa umsebenzi otyunjelwayo - njengeKing Leopold waseCongo Free State (oqhutywe njengenkampu enkulu yabasebenzi) okanye njenge- libertos kwiindawo zokuPhuthuke zaseCape Verde okanye iSan Tome.
Ziziphi iintlobo zobukhoboka abaye bafumana amaAfrika?
Iyakwazi ukuphikiswa ukuba zonke ezi zilandelayo zifanelekile njengezigqila - iZizwe eziManyeneyo zibona ubukhoboka "bubume okanye imeko yomntu phezu kwayo nayiphi na okanye onke amagunya afakelwa ilungelo lobunikazi" kwaye uyabakhoboka " umntu kwimeko okanye imeko " 1 .
Izigqila ze-Chattel ziyimpahla kwaye zingathengiswa ngolo hlobo. Abanamalungelo, kulindeleke ukuba benze umsebenzi (kunye neentlobano zesini) ngomyalelo wenkosi yekhoboka. Le yindlela yobukhoboka eyenziwa eMerika ngenxa yoshishino lwekhoboka le- trans-Atlantic .
Kukho iingxelo zokuthi ubukhoboka be-chattel kusekho kwiNtshonalanga Afrika yamaSilamsi, kumazwe afana neMauritania neSudan (nangona zombini amazwe athatha inxaxheba kwintlanganiso ye-slavery ye-UN ye-1956).
Omnye umzekelo nguFrancis Bok, owabanjiswa ebukhosini ngexesha lokuhlaselwa kwidolophana yakhe eningizimu yeSudan ngo-1986 eneminyaka engama-7 ubudala, kwaye wachitha iminyaka elishumi njengekhoboka le-chattel enyakatho yeSudan ngaphambi kokuba aphunyuke. Urhulumente waseSudan uphika ubukho bobukhoboka kwilizwe lawo.
Ukugqithiswa kwetyala, abasebenzi abaxhamliweyo, okanye i-peonage, kubandakanya ukusetyenziswa kwabantu njengento yokubambisana neentyala.
Umsebenzi unikezelwa ngumntu onetyala, okanye isihlobo (ngokuqhelekileyo umntwana). Kwakungavumelekile ukuba umntu oqeshwe ukuba abalekele amatyala abo, kuba ezinye iindleko zaziza kuqhubeka ngexesha lokugqila (ukutya, izambatho, indawo yokuhlala), kwaye kwakungekho kwaziwa ukuba ityala lizuze kwiinqununu ezininzi.
EmaMelika, i-peonage yongezwa ukuba ibandakanye i-peonage crime, apho amabanjwa agwetyelwe umsebenzi okhuni 'ayehlwayelwe' kumaqela abucala okanye karhulumente.
I-Afrika inomxholo oyingqayizivele wokugqithiswa kwetyala: ukukhwabanisa . Abafundi be-Afrocentric bathi le nto yayiyindlela enamandla kakhulu yokugqithiswa kwetyala xa kuthelekiswa nakwabanye amava nakwezinye iindawo, kuba kwakuza kwenzeka kwintsapho okanye kwindawo yoluntu apho kwakukho ubudlelwane boluntu phakathi komboleki kunye nomboleki.
Ngenye indlela eyaziwa ngokuba ngumsebenzi 'ongenasiphelo'. Umsebenzi oqiniweyo, njengoko igama libhekisela, lusekelwe kwisongelo lobundlobongela kubasebenzi (okanye intsapho yabo). Abasebenzi abasebenzisanayo ngexesha elilodwa baya kuzifumana bengenakukwazi ukuphunyuka. Le nto yayisetyenziswe kakhulu kwiKing Leopold yaseCongo Free State nakwiindawo zesiPutukezi zaseCape Verde naseSan Tome.
Ixesha eliqhelekileyo livame ukukhawulelwa kwiYurophu ephakathi apho umlimi ongumqeshi wayebophelelwe kwicandelo lomhlaba kwaye ngaloo ndlela wayephantsi kolawulo lomnini-ndawo.
I-serf yazuza ukuhlaliswa ngokutshalwa kwelizwe lenkosi yayo kwaye yayijongene nokubonelela ngezinye iinkonzo, njengokusebenza kwezinye iindawo zomhlaba okanye ukujoyina ibutho lemfazwe. I-serf yayiboshwe kwilizwe, kwaye ayizange ihambe ngaphandle kwemvume yenkosi yayo. I-serf nayo ifuna imvume yokutshata, ukuthengisa impahla okanye ukutshintsha umsebenzi wabo. Naluphina ulungiso lomthetho lubekwe nenkosi.
Nangona oku kuthethwa ngumoya waseYurophu, iimeko zobukhoboka azifani nezo zifunyanwa phantsi kwezikumkani ezininzi zaseAfrika, ezifana nezokwaZulu ekuqaleni kwekhulu le-19.
1 Ukususela kwiNgqungquthela eyongezelelweyo yokupheliswa koBakhoboka, uRhweba loRhweba, kunye namaZiko kunye nemiSebenzi efana noBakhoboka , njengoko yamkelwa yiNgqungquthela yePlenipotentiaries eyabanjelwa yiSigqibo 608 (XXI) se-Epreli ka-1956 (i-XXI) ye-I-Epreli ka-1956 yenzeke eGeneva 7 Septemba 1956.
Biography kaSonni Ali
Imbali emfutshane kakhulu yeCôte d'Ivoire
I-Biography ye-Idi Amin Dada
I-Biography: Ellen Johnson-Sirleaf, eLiberia 'I-Iron Lady'
Imbali emfutshane yeMali
UmThetho wokuNqanda uMtshato oMxube
Indlela i-Lactose yamahhala yamahhala eyenziwe ngayo
Ukukhupha amaxesha kwi-Excel kunye nomsebenzi we-YEAR
Iingcebiso Ezilula Zokunceda Abantwana Baqulunqe Umbhalo
Dibana noNikodemo: Ufuna uThixo
Imiba Eqhoshayo Nge-Satanic Leaf-Tailed Gecko
1933 I-British Open: I-Playoff Win for Shute
Isikhokelo soQalelo kwiKhadi lezemidlalo Ukuqokelela
Ukuhlaziywa kwePacrylic Paint: M. Graham & Co. Acrylics
Imimoya kunye neGradient Force Force
U-2017 UMongameli weNdebe: Iqela le-USA Romp
Ubungqina beNtloko yabafazi
Amaqhinga ukuya kwiFilimu: AmaKomidi abaye baba yiNkwenkwezi zeeNkwenkwezi